Trano fandraisam-bahiny (Belize), Tranon'ny governemanta - Belize City
Amerika Avaratra Belize Belize City
Adiresy: Lalana Regent, Belize;
Natao: eo amin'ny 1800 hatramin'ny 1820 taona.
Tetikasa mandeha: Mon. - Fri. 8:30 hatramin'ny 17:00.
Iray amin'ireo tsangambato fanta-daza indrindra momba an'i Belize ny House Government, izay miavaka amin'ny tranokala sy ny trano fonenany. Tamin'ny taona ara-tantara dia nomena ny governora-jeneraly, izay nalefan'ny mpanjaka Anglisy hifehy an'i Belize .
Sehatra manan-tantara avy amin'ny Trano Governemanta
Ny tranon'ny governemanta dia noforonin 'ny mpanao mari-trano Christopher Rahn, izay nahavita nampifandray ny tranokalam-panorenana iray tao anatin' ny tranobe iray, ary ny aristokraty ny rafitra Anglisy. Ny rafitra dia manintona ny sain'ny mpizahatany tsy amin'ny alalan'ny endrika kanto, fa noho ny zava-niseho ara-tantara izay nitranga tao.
Nosoniavina ny didim-pitsarana manakana ny fanandevozana, tamin'ny taona 1834, tamin'ny fotoana nanaovana ny tranon'ny Governemanta fankalazana lehibe. Tamin'ny 1981, io trano io dia nidina ny sainam-pirenena Anglisy ary natsangana iray vaovao, izay tsy miankina intsony any Belize.
Trano fitondram-panjakana amin'izao androntsika izao
Hatramin'izao, ny tranon'ny Governemanta dia manana andraikitra lehibe eo amin'ny fiainam-piarahamonin'ny fiaraha-monina sy ara-kolotsain'ny firenena. Nifindra tao amin'ny Minisiteran'ny Kolontsaina ilay tranobe, izay nanova azy ho tranon'ny kolontsaina. Ireo mponina ao an-toerana dia mitsidika mandrakariva ireo fampirantiana natao tao amin'ilay trano. Ny iray amin'ireo fampirantiana lehibe indrindra dia ny fanangonam-tsary nandritra ny taona lasa izay mpikaroka sy mpahay siansa fanta-daza. Ankoatra ny fampiratiana maharitra, natao ny fampirantiana vonjimaika, ka ny mpizaha tany dia manana fahafahana hiditra amin'ny zavatra tsy manam-paharoa.
Satria ny tranon'ny Governemanta dia voahodidin'ny zaridaina iray misy ahi-maitso sy hazo samihafa, ny mponin'i Belize dia mampiasa izany mba hanaovana lanonana fampakaram-bady sy hankalaza ny hetsika an-tanàna. Ankoatra izany, misy karazam-borona miavaka izay manintona ny ornithologists manerana izao tontolo izao.
Ny tranobe no ivon'ny fiainana ara-kolontsaina sy ara-tsosialy ao an-tanàna, ary koa ny mari-pamantarana sy ny fanintelony. Ny tranon'ny governemanta koa dia ampiasaina ho sehatry ny fampisehoana, izay anaovana andiana antoko sy vondrona isan-karazany.
Ahoana no hahatongavana any amin'ny tranon'ny Governemanta?
Ny tranobe dia miorina eo amin'ny faritra atsimon'ny tanàna, izay natsangana tamin'ny fotoana nandraisan'ny firenena an'i Angletera. Afaka mankany amin'ny tranom-panjakana ianao amin'ny fikarohana ny lalana Regent, tsy lavitra ny Katedraly St. John.
Azonao atao ny mandeha eo ambonin'ilay tetezana, ary avy eo amin'ny kianja, ary koa amin'ny fiara amin'ny alalan'i Caesar Reach Road. Ny tranombakoka dia miasa amin'ny 8.30 hatramin'ny 5 ora hariva ka hatramin'ny alatsinainy ka zoma.
Famantarana ny ureaplasmosis amin'ny vehivavy
13 tricks, mahafantatra izay afaka mandeha amim-pahendrena
Paragripp - ny soritr'aretina sy ny fitsaboana ireo karazam-biby mampidi-doza indrindra
Pasta miaraka amin'ny salmon ao anaty saosy siramamy - sakafo mahasalama ho an'ny sakafo matsiro
Ahoana no hanesorana ilay holatra ao amin'ny lakaly?
Nahoana aho no mila mahafantatra ny abidia?
Famantarana ho an'ny fahasambarana
Jennifer Aniston nibanjina tsy misy lamba rongony, nilaza izy fa tsy matahotra ny fahanterana
Zac Efron sy Sami Miro
Caps with hooks
Phacelia - ciderate
Ahoana ny fisafidianana motocross?
Ahoana no handoavana ny lanjany ao amin'ny gym?
Toerana fisakafoanana mihaja ho an'ny lakozia